बुटवलमा थप एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु | Mechikali Daily
Posted By: रमेश पराजुलीon: १४ भाद्र २०७७, आईतवार १३:३४
बुटवल, भदौ १४ । बुटवल आइतबार थप एक जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार मृत्यु हुने व्यक्ति बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ५ रुपन्देहीका ६७ वर्षिय पुरूष हुन् ।
उच्च ज्वरोका कारण आइतबार बिहान चार बजे अस्पताल आएका व्यक्तिको दु्रत परीक्षण विधिबाट पीसीआर जाँच गर्दा कोभिड–१९ देखिएको बुटवलको कोभिड अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिए । ‘कोभिड देखिएपछि उहाँलाई आसियुको आवश्यकता देखेर हामी भरतपुर रिर्फर गरेका थियौ । यहाँको आइसियू र भेन्टिलेरट बेड विरामीले भरिएका छन् । परिवारले लैजान नसक्ने अवस्था आएपछि आइसोलेसनमा राखेर अक्सिजन दिँदा दिँदै उहाँको मृत्यु भयो’ डा. थापाले भने । उनको आइतबार दिउसो निधन भएको हो ।
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर अस्पतालमा भर्ना भएका उनमा ज्वरो, स्वासप्रश्वासमा समस्या, मुटुरोग, मधुमेह र उच्चरक्तचापको समस्या रहेको अस्पतालले जनाएको छ । योसँग रुपन्देहीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुगेको छ ।